Madaxweynaha Puntland oo codsaday caawimaad caalami ah oo wax looga qabto abaarta daran - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandMadaxweynaha Puntland oo codsaday caawimaad caalami ah oo wax looga qabto abaarta daran
Madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali. [Sawirka: Puntlamd Mirror]
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa beesha caalamka ka codsaday in ay caawiyaan dadka abaartu saamaysay ee kunool gobolada Puntland.
Isaga oo saxaafada kula hadlayay shalay oo Arbaco ahayd magaalada Garoowe, madaxweynaha Puntland ayaa iclaamiyay caawimaad caalami ah oo deg deg ah.
“Xaalada abaarta ee gudaha Puntland waa mid aad u daran, xoolo badan baa dhintay, dadka reer miyiga ahna waxay ka hayaameen dhulkii ay ku nolaayeen waxayna ku xeroodeen magaalooyinka sababtoo ah xoolahoodii baa ka baxay,” ayuu yiri madaxweyne Cabdiweli.
“Waxaan si deg deg ah u uga codsanayaa beesha caalamka in ay cuno iyo biyo ku caawiyaan dadka ay abaartu saamaysay.” Ayuu ku daray.
Gobolada Nugaal, Bari, Mudug, Sool, Sanaag iyo Karkaar ayaa ah meelaha ugu daran oo ay abaarta jirta saamaysay, sida ay sheegtay haayada musiibooyinka iyo arrimaha insaanimada u qaabilsan Puntland ee HADMA.
January 18, 2018 Qaramada Midoobay oo sheegtay in 6 milyan oo Soomaali ah ay u baahanyihiin gargaar deg deg ah